BIDGEE VIEW - indlu ephambi komlambo - I-Airbnb
BIDGEE VIEW - indlu ephambi komlambo
Hay South, New South Wales, Australia
Isanda kulungiswa, imema indlu yokulala ye-3, ejonge umlambo i-Murrumbidgee enemibono emangalisayo ukusuka kumagumbi okulala ama-2 kunye nekhitshi / indawo yokuhlala.
Ifakwe kwicala lasezantsi leHay, imisebenzi ayinamda ngokhetho olubandakanya ukuloba, ukukhwela inqanawa, ukubukela iintaka, ukuhamba etyholweni kunye nokuqubha ukusuka kulwandle olunesanti yabucala, konke kumnyango wakho ongasemva.
Ziphathe kwindawo epholileyo yokuphumla kwaye uphumle kwindawo ezolileyo.
I-Bidgee View yindawo ezolileyo, yabucala kunye neyodwa. Indlu inombono omangalisayo womlambo ngokusebenzisa imaze yeefestile ezijonge emantla. Ubomi beentaka buninzi kwaye kumnandi ukubukela. Amaqanda amatsha ayafumaneka kwiindwendwe ngqo kwi-chookyard. Ekupheleni kosuku uyonwabele ukuhlala kwiveranda efunxa i-ambience yomlambo iMurrumbidgee.
Ifihlwe kwisitalato iBoon kwaye emva kweHay ikharavani park yeyona mfihlo igcinwe eHay! Le ndawo ivuleleka kwizindlu zabucala, eziphangaleleyo, zokuhlala ezinemiba yomlambo. Umbono weBidgee ubekwe kule ndawo iphezulu. I-paddock encinci likhaya loluhlu lwasimahla kwaye liyinxalenye yeBidgee View yangasemva.
Ndiyafumaneka ukuba ndincokole neendwendwe kwaye ndingaqhagamshelwa ngefowuni/umbhalo, kungenjalo ukuba iindwendwe zikhetha ukuba ngasese, oko kuya kuhlonitshwa.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2746-9
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hay South